Ny alarobia lasa teo no nanohizan’ny kandidà Andry Rajoelina laharana faha-13 ny fampielezan-keviny tany amin’ny Distrikan’i Manjakandriana. Tsena goavana, sekoly ambaratonga voalohany fototra manara-penitra, ireo no fampanantenana nomen’ny kandidà n°13 ho an’ny vahoakan’ i Manjakandriana.
Tafita tamin’ny vahoakan’ i Manjakandriana ny hafatra. Mifanao fotoana amin’ny kandidà Andry Rajoelina izy ireo ny 7 Novambra ho avy izao.
Omaly maraina nandritra ny fandalovan’ny kandidà laharana faha-13 tany an-toerana dia nifanitsakitro tanteraka ny vahoaka tonga nihaino sy nifampitafa mivantana tamin’i Andry Rajoelina. Vahoaka izay mangetaheta fampandrosoana sy fiainana milamina.
Nijoro ho vahaolana ho azy ireo ny kandidà Andry Rajoelina. Avy hatrany dia ireo fotodrafitrasa mamaly ny filàn’ny mponina amin’ny fiainana andavanandro no natolotry ny kandidà laharana faha-13 ho azy ireo. Fampanantenana lehibe nomeny tamin’ izany ny hanamboarana ny tsena ho lehibe sy goavana. Ambohi-pihaonan’ireo mponina avy any amin’ny Kaominina manodidina isaky ny alarobia ny tsena. Hatramin’izay no efa nametraka ho laharam-pahamehana ny fampianarana sy ny lova ho an’ny taranaka fara aman-dimby ny kandidà Andry Rajoelina. Anisany velirano nifanaovany tamin’ ireo mponina ihany koa ny fanamboarana sekoly ambaratonga fototra manara-penitra.
Tanjona ny mba hianaran’ny zaza Malagasy ao anatina fotodrafitrasa goavana tsy mena-mitaha amin’ny any ivelany. Toeram-pianarana ahitana efitrano famakiam-boky, fianarana informatika ary kianja filalaovam-baolina “synthétique”. Tahaka ireo Distrika hafa dia misitraka ny fihenan’ny vidin-jiro hatrany amin’ny 25% ihany koa ny mponin’i Manjakandriana amin’ny alalan’ny fametrahana ny foiben-toerana mpamokatra herinaratra amin’ny alalan’ny angovo azo havaozina.
Fotodrafitrasa maro no efa vita
Mialoha ny fampielezan-kevitra dia efa nandalovan’ny kandidà Andry Rajoelina ny Distrikan’i Manjakandriana nandritra ny fitetezam-paritra nataony ho fampahafantarana ny IEM ny volana aogositra lasa teo. Nampanantena tamin’ izany ny kandidà n°13 fa hanamboatra kianja filalaovam-baolina baskety ho an’ny tanora. Efa vita soa aman-tsara izany amin’izao fotoana ary efa ampiasain’ireo tanora. Nilaza ihany koa ny tenany fa hamboatra ny lalana izay mampifandray an’i Manjakandriana amin’ny Manankavaly, Ambohitseheno ary Ambohitrandriamanitra. Efa vita ihany koa io lalana io ary efa ifamezivezen’ny mponina. Tao anatin’ ny roa volana monja dia tanteraka ireo fampanantenana nomeny.
Mihoatra lavitra ireny no vitany raha toa ka omen’ny vahoaka azy ny fitokisany amin’ny 7 novambra ho avy izao. Marihana fa ben’ny tanàna miisa 17 voafidy tao anatin’ny Distrikan’i Manjakandriana no tonga nanotrona ny kandidà Andry Rajoelina nandritra io fandalovany tany an-toerana io.